909s ဟာဝိုင်ယီကျွန်းတွင်ကျွန်းပေါ်သို့ခုန်ချခြင်း | MTB Oahu &amp; Maui images and subtitles
- ဟေ့ဒီရိုက်ချက်ထဲမှာကြက်သားလား ငါတို့အခုကောင်းပြီလား ကောင်းပါပြီ။ ချစ်သူ ကြှနျုပျအားလပျရကျယူနတေယျ။ piranhas မရှိဘူးလို့ငါမျှော်လင့်တယ်။ ဒါဟာအလွန်ကောင်းတဲ့ခရီးတစ်ခုပါ၊ ငါရည်းစားဘရွတ်နဲ့ဒီမှာရှိနေတယ် ငါတို့ဟာဝိုင်ယီကျွန်းကိုနှစ်ပတ်လေ့လာနေတယ်။ Oahu ကိုတစ်ပတ်လောက်လေ့လာခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ Maui ကအခြားအဘို့။ Waikiki မှာကျွန်တော်တို့နှစ်သစ်တွေနေခဲ့ကြတာအံ့သြစရာပါ။ ထိုအခါငါငါ၏တောင်ကြီးစက်ဘီးကိုဆောင်ခဲ့လေ၏။ ကျွန်တော့်တောင်တက်စက်ဘီးကိုယူလာရမယ်။ ဟာဝိုင်ယီကျွန်းစုဘယ်လောက်များများရှိသနည်း။ Brooke ရဲ့ကင်မရာနောက်ကွယ်မှာသူကကျွန်မကိုလက်သင်္ကေတပြပေးနိုင်သည်။ ဟာဝိုင်အီကျွန်းများနှင့်အတူသူမအပေါ်သုတ်ပဝါရှိသည်။ သူမသည်ကျွန်းရေတွက်မယ်။ ကြည့်ရအောင်၊ ဟာဝိုင်ယီကျွန်းကြီး၊ Maui, Oahu, Lanai, Kauai, Niihau နီဟေး? ခုနှစ်! ငါခြောက်လကပြောသည်။ - သင်သိတယ်၊ ငါသိသင့်သည်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ့ရဲ့နောက်ကျောမှာမွေးဖွားအမှတ်အသားရှိနေလို့ပဲ။ တကယ်တော့ဟာဝိုင်အီကျွန်းစုတွေနဲ့တူတယ် \_ t သင်ဝေးကနေ squint လျှင်။ (လုံ့လရှိသည့်တီးမှုတ်ဂီတ) - ဟာဝိုင်ယီတွင်ကျွန်တော်စက်ဘီးစီးသည်။ ငါ Maui နှင့် Kauai အတွက်တောင်ပေါ်စက်ဘီးစီး။ Oahu မှာဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူး၊ ဒါကြီးကြီးမားမားကြီးပဲ ငါ့ကိုငါ့ပုံးစာရင်းကိုဖြတ်ကူးရန်အဘို့။ ကျွန်တော့်စက်ဘီးကို Airbnb ကနေလမ်းကြောင်းခေါင်းပေါ်ကိုစီးခဲ့တယ်။ အသွားအလာလုံးဝစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောဖြစ်ပါတယ် ယခုနှစ်ဤအချိန်တွင်မြောက်ဘက်ကမ်းပေါ်တွင်။ ဒီလမ်းကြောင်းတွေကို YouTube ဗီဒီယိုမှာတွေ့ခဲ့တယ်။ သူ့နာမည်ကဘာလဲ MountainBikeDaddy သို့မဟုတ်တစ်ခုခုလား MountainBikeDad? - [TrailDad] ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်အကြောင်းပြောနေတာပါ။ - ငါနုတ်ထွက်ဖို့အနည်းငယ်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကစကတ်ထူပြားလေးပါပဲ။ ငါနင့်ကိုတကယ်ဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်လို့ထင်ခဲ့တယ် ငါကျဆင်းတော့မည် 17 နှစ်အရွယ် Brady သည်သူ၏စက်ဘီးနှင့်အတူတက်မိတ်ဆက် သူက "သင် Matt လား?" "အင်း။ " "ကောင်းပြီဒါမမျှော်လင့်ဘဲဖြစ်ခဲ့သည်။ " သူကနေမကောင်းဖြစ်သည့် IFHT လက်အိတ်ကိုလှုပ်ခါနေသည်။ Brady ငါ့ကိုလှည့်ပတ်ပြသရန်လုံလောက်သောကောင်းတဲ့, ဒါကြောင့်ငါရှုံးနိမ့်ဖို့မလိုအပ်ခဲ့ ထိုအရာသည်ကြီးလှ၏။ မင်္ဂလာရှိ၏ မင်္ဂလာရှိ၏ (အနာဂတ်ဂျက်ဇ်ဂီတ) အိုးအို၊ မင်းသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရပြီ။ (ရယ်သံများ) ဟုတ်တယ် မင်္ဂလာရှိ၏ ကျနော်တို့ကြီးမားတဲ့ခုန်လမ်းကြောင်းမှတက်လှိမ့် ငါတို့စတိဗ်နဲ့တွေ့ခဲ့တယ် သူကအဲဒီမှာလမ်းကြောင်းဆောက်သူ။ Stoked dude, အသည်းအသန် dude, သူလည်းငါတို့ဗီဒီယိုတွေကိုတကယ်မြင်ဖူးတယ်၊ ဒါကြောင့်သူကမြို့ပြင်ကမြို့သူမြို့သားစုံတွဲတစ်တွဲကိုတွေ့ဖို့တကယ်ပဲပန့်ကိုတင်လိုက်တယ်၊ မိမိအခုန်လမ်းကြောင်းစီး။ - [စတိဗ်] ယောက်ျားတွေဘယ်မှာနေသလဲ။ - [Matt] ဗန်ကူးဗား။ - [စတိဗ်] အိုးမရှိလမ်း! ကြိုဆိုပါတယ် - [Matt] ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ - [စတိဗ်] ဗန်ကူးဗားရဲ့ဘယ်အပိုင်းလဲ။ - [Matt] မြောက်ဘက်ကမ်းတွင်ရှိသည်။ - Ah dude၊ ငါမနာလိုဝန်တိုတယ်။ - [Matt] ပြီးတော့ဘရဒီ၊ ဒီနေ့ကျွန်တော်သူ့ကိုတွေ့ခဲ့တယ်၊ Alabama မှလာသည် - အိုး wow အိုးအေးမြ။ ငါ Squamish နှင့် Whistler ၌ရှိ၏ သန့်ရှင်းသော shit, ငါ့ ဦး ခေါင်းပဲ (Beep) အဲဒီမှာတက်ပေါက်ကွဲခဲ့။ - [WTF Boom Man Voice] ဘာလဲ၊ (ကျယ်လောင်သောပေါက်ကွဲမှု) - ငါဒီမှာစေတနာ့ဝန်ထမ်းတစ် ဦး ပါ။ ထိုအခါငါသင်တို့ကိုယောက်ျားတွေကြည့်ဖို့ stoked မိပါတယ်။ ဤသည် kinda ငါ့စီမံကိန်းကိုဖြစ်ပါတယ်။ အခြားယောက်ျားတွေအများကြီးနှင့်အတူ။ - [Matt] ငါကြိုက်တယ်။ (ရော့ခ်ဂီတလှိုင်း) မင်္ဂလာရှိ၏ ဒါဟာအလွန်ကြီးစွာသောအချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကဤခုန်အပေါ်ကောင်းသော session တစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါခုန်တော်တော်ကြီးမားတဲ့ခဲ့ကြသည်။ Cowabunga Booter လို့ခေါ်တဲ့ခုန်ကျော်သွားတယ်။ Cowabunga Booter, ငါ့ dude ။ ရပါတယ်! ကောင်းတယ် မင်္ဂလာရှိ၏ - [စတိဗ်] ဖျားနာသည်။ ခေါက်။ - [Matt] ဤနေရာတွင်သင်၏အလုပ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ - ဟုတ်ကဲ့၊ - [Matt] အိုဘုရားသခင်၊ ဒါကိုထပ်ပြီးထိချင်တယ်။ မင်္ဂလာရှိ၏ (အော်) Pupukea ငါ့ကိုသတ်တယ် ငါနီးပါး uh, bonked ။ ဘုရားရေ။ အိုး Fuh! အာ အရမ်းနီးတယ် (chuckles) အိုး မင်္ဂလာရှိ၏ (ထပ်ကျော့ပိုသောဂီတ) Oahu ပြီးနောက်ကျနော်တို့ Maui ကိုပျံသန်းခဲ့သည် $ 80, $ 100-ish ပျံသန်းမှု ထိုအခါငါ Makawao ထွက်စစ်ဆေးခဲ့ရသည်။ ဒါဟာစူပါရွှံ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါတကယ်စီးနင်းသင့်မသင့်ကိုမေးခွန်းထုတ်ခဲ့တယ်၊ ဤအလမ်းကြောင်းရေခဲကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။ ဒီမှာဖုန်ကဒါရွှံ့နဲ့တူတယ်၊ ပြီးတော့မင်းအပေါ်မှာမိုးနည်းနည်းရွာတယ် ပြီးတော့ရေခဲကိတ်ကွင်းဖြစ်လာတယ်။ (chuckles) (ဟာသစန္ဒရားတေးဂီတ) မင်္ဂလာပါ။ အိုဘုရားသခင်၊ ဤသည်ကားစီး။ မရပါ။ ပြီးတော့ငါအဲရစ်တွေ့ဆုံရန်တယ်။ သူကကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း Jake နဲ့ Tim တို့နဲ့အတူစီးသွားခဲ့တယ်။ ကြီးစွာသောအံ့ was ဘွယ်ရှိ၏။ (သွက်သွက်သောဂီတ) ဟာဝယေံလွမ်။ - [အဲရစ်] ဒါကအညိုရောင်ပါ။ (Matt chuckles) - [Matt] ရပါတယ်။ (ရယ်သံများ) ဖုန် surfin '! အာ (chuckles) ဒါကြောက်စရာကောင်းတယ် မင်္ဂလာရှိ၏ (ရယ်သံများ) အင်း! ဟူး! အာ (chuckles) - [တိ] မင်းတို့ဖြတ်သွားခဲ့တဲ့သစ်ပင်ကိုမင်းသိလား။ အဲဒီဌာနခွဲလား - [Jake] ဟုတ်တယ်။ - မင်းကမင်းကိုချောင်ခဲ့တယ်၊ သင်ငါ့ကိုလက်ျာဘက်မှာပစ်ချတယ်။ - [Matt] သူကကျွန်တော့်ကိုအနည်းငယ်ပစ်ချလိုက်တယ်လို့ထင်ပါတယ် - ဒါဟာရုံက detach လုပ်လိုက်တယ်။ - [Matt] တကယ်ပဲအိုး။ အိုးလမ်းမ။ ငါဒီမှာငါတတ်နိုင်သမျှလုပ်နေတာငါ ya ငါသိ၏။ မင်္ဂလာရှိ၏ - [Matt] ၎င်းသည် (Beep) ဖျားနာနေခြင်းဖြစ်သည်။ Aw man - [တိ] ဒါအရမ်းပျော်ဖို့ကောင်းတယ်။ ငါစီးနင်းနေတာကိုကြည့်နေတာဘဲ၊ နှင့်ညာဘက်လမ်းကြောင်းမှချွတ်ခုန်, \_ t ငါပဲထွန်။ (ရယ်မောသံများ) - [အဲရစ်] အဆုံးမဲ့လိုင်းများ၊ သင် chainsaw ထွက်ချိုးချင်တယ်ဆိုရင်။ - [Jake] မင်းမှာသူငယ်ချင်းစစ်တပ်ရှိရမယ် သင်လမ်းထဲက shit ဆွဲထုတ်ကူညီခြင်း။ - [Jake] ဒါကကောင်းလိုက်တာ။ - [Jake] ဟုတ်တယ်၊ ဘယ်တော့မှမလည်ဘူး။ - [ဂျိတ်ခ်ျ] ကျွန်ုပ်သည်အရာအားလုံး၏ကြီးမားသောပန်ကာဖြစ်သည် သောငါ၏ (beep) ထဲကလာပါတယ်။ - Jake က Eric Andre ကိုသတိရစေသည်။ ထိုအခါငါအဲရစ် Andre စဉ်းစားကိုရပ်တန့်နိုင်ဘူး။ (chuckles) - Chattery ဤကဲ့သို့ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ - [Matt] ၀ ဲ! မင်္ဂလာရှိ၏ ကောင်းတယ် (လုံ့လရှိသူဂီတ) မင်္ဂလာရှိ၏ ဟားဟား! ငါအရမ်းပြုံးနေတဲ့အတွက်ငါ့မျက်နှာနာကျင်နေတယ်လို့ပြောတယ် ဒါဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ မှတ်မိဖို့တစ် ဦး စီးနင်း။ ဒါဟာတော်တော်အန္တရာယ်များတဲ့လမ်းကြောင်းပါ သငျသညျမယ်တစ် ဦး တည်းထွက်ရှိဖြစ်လျှင်။ ထွက်ပေါက်မရှိဘူး - အကယ်၍ သင့်တွင်ပြissuesနာတစ်ခုခုရှိလျှင်မရှိပါ ညာဘက်ရှိလမ်းများအတွက်တက်ဆွဲ။ - [Jake] မင်းပြန်တက်ရမယ် - ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူး။ - တစ်စုံတစ် ဦး ကသင့်အားထိုနေရာမှကယ်တင်ရန်မလွယ်ကူပါ။ ဒီတော့မင်းသိတယ်၊ မင်းဒီလမ်းကြောင်းကိုဖြတ်ပြီးသွားရင် \_ t သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နှင့်အတူစီးပါသို့မဟုတ်သင်အဆင်သင့်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။ (ရွှင်လန်းသောဂျက်ဇ်ဂီတ) အဲရစ်ကကျွန်တော့်ကို Makawao ကိုပြန်ခေါ်သွားတယ် နေသာလှပသောနေ့၊ ပြီးတော့သူ့သားကင်မရွန်နဲ့ကျွန်တော်စီးခဲ့တယ်။ ဘာလဲဘာလဲ ya ဘယ်လိုနေလဲ သင့်နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ? - ကင်မရွန်။ - [Matt] ယနေ့ကျွန်ုပ်ကိုဘယ်မှာခေါ်ဆောင်နေသနည်း။ - အိုးငါမသိဘူး - [Matt] မင်းမသိဘူးလား။ - ငါတကယ်ခံစားရတဲ့နေရာတိုင်းမှာပဲ။ - [Matt] ကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်မှာရှိသနည်း။ - Makawao ။ - မင်းအတွက်မင်းအတွက်လက်ဆောင်တစ်ခုရှိတယ်။ ဒီပစ္စည်းပစ္စယ junk ဟုတ်မဟုတ်ငါမသိ။ - အိုးငါသောက်လိမ့်မယ် - [Matt] ကောင်းတယ်။ မင်းဘာလို့ဘီယာသောက်တာလဲ - [Matt] ဤအရာကားအဘယ်နည်း။ ဒါကမင်းဆီကလား - အင်း။ - [Matt] အဲဒါဘာလဲ။ ခွက် ဖျားနာ! ဒါကကျေးဇူးပဲ၊ - ငါ့အမေကဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ - [Matt] ငါက Maui ကော်ဖီသောက်တော့မယ်။ အိုးအဲဒီမှာ ya သွား, ya ဘာရတယ်? - [ကင်မရွန်] yer brakez နှင့် Mahalo My Dude ကိုမတို့ပါနဲ့ .. - [Matt] \_ t အိုး။ ငါအတူတူနီးပါးရှိသည်။ ငါဒီမှာ yer ဘရိတ်မထိကြဘူး။ - ငါ yer brakez ကိုမတို့ထိချင်ဘူး သူမအမြဲတမ်းကြောက်နေတဲ့အတွက်ကျွန်မအမေစက်ဘီးပေါ်မှာ အစာရှောင်ခြင်း၏ - [Matt] တခါတရံတွင်သင်သတိပေးချက်တစ်ခုလိုအပ်သည်။ အားလုံးနွေးပါစေ။ အိုးလျှို့ဝှက်တဲ့လမ်းကြောင်း။ ဒီလျှို့ဝှက်လမ်းကြောင်းလား - [Matt] ကင်မရွန်၊ မင်းငါ့ကိုရှုပ်ထွေးနေတယ်၊ အိုဟုတ်တယ်။ ငါခုန်ပြီးသားကြည့်ပါ။ (အပန်းဖြေဂီတဂီတ) မင်္ဂလာရှိ၏ ဒီပစ္စည်းအတွက်သင့်သံခမောက်လုံးလိုကောင်းလိုလိမ့်မည်။ - Sprite နှုန်း [Matt] မိုင်? - [ကင်မရွန်] ဟုတ်ပါတယ်။ Skrrt! - ငါသူ့ကိုနောက်ထပ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပြသချင်တယ်, နောက်မှပြန်သွားလို့ရတယ် အာ - Wrangler? - အင်း Wrangler ။ - အိုကေသွားကြကုန်အံ့။ - ငါတို့သူ့ကို Wrangler ကိုပြပါလိမ့်မယ်, ပြီးတော့ရဲ့နောက်ကျောကိုတက်ကြကုန်အံ့။ - [Matt] ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ သူတို့နောက်တစ်လမ်းကိုသွားခဲ့သလား။ - မဟုတ်ပါ၊ တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ Ravine ကိုတက်ရန်ဖြစ်သည်။ သောကုန်းတက်လမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ အိုး! (Airhorn ဆူညံသံ) အဲရစ်နဲ့ကင်မရွန်တို့မှာတကယ်ကိုကောင်းတဲ့စနစ်ရှိတယ်။ ဘယ်မှာအဲရစ်အတွင်းပြွန်နှင့်အတူကင်မရွန်ခေါ်ဆောင်သွားသည်ဆိုပါစို့ နှင့်တစ် ဦး ratchet သိုင်းကြိုးသို့မဟုတ်တစ်ခုခုနဲ့တူ။ - [မိန်းမ] ဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့အကြံဥာဏ်လဲ။ အဲရစ်လည်းခါးပတ်ကိုခါး၌စည်းလိုက်သည်၊ ပြီးတော့အတွင်းပိုင်းပြွန်ကိုကင်မရွန်ရဲ့အရက်ဆိုင်တွေဆီကို \_ t သူကပဲအဲဒီမှာတက်တတ်၏။ ပြီးတော့အဲဒီမှာသူတို့တက်နေကြတယ်၊ ငါစဉ်းစားခဲ့လျှင်, ကျွန်တော့်အဖေအတွက်ဂိမ်းကစားခဲ့မှာပါ။ သူကနှစ်ခါလုပ်ခဲ့ပြီးပြီ။ လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်လိုပဲ။ ဒီတော့ Cameron မင်းအကြိုက်ဆုံးလမ်းကြောင်းကဘာလဲ။ - [Matt] သစ်ပင်များအားလုံးကိုသင်သိသလော။ သငျသညျငါ့ကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြောပြ, သစ်ပင်အားလုံးသိတယ်။ - [Matt] ကျွန်ုပ်သည် guinea pigging မဟုတ်ပါ။ (ရယ်မောသံများ) - ကောင်းပြီ၊ ငါထင်လိမ့်မယ်၊ မင်းဒီမှာသိသမျှအရာအားလုံးနဲ့တူတယ်ဆိုတာမင်းသိတယ် သငျသညျကနေဒါယောက်ျားတွေများအတွက်ခြောက်ပေကွင်းပေါ်တွင်ကစား။ (Matt ရယ်) (ချမ်းတေးဂီတ) မင်္ဂလာရှိ၏ အာ ဒါကအံ့သြစရာပဲ! ဒါကအရမ်းပျော်ဖို့ကောင်းတယ် ဒီခရီးစဉ်ကအရမ်းကိုအေးပါတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါဒေသခံတွေနဲ့တွေ့ဆုံရတယ်။ သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုပစ္စည်းတွေဝေပေးပြီးရိုက်ခွင့်ပေးတယ်။ ပြီးတော့ဒီဗွီဒီယိုကိုလူတိုင်းဝေမျှပါ။ ငါ့ကိုလှည့်ပတ်ပြသတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကင်မရွန် ...
ဟာဝိုင်ယီကျွန်းတွင်ကျွန်းပေါ်သို့ခုန်ချခြင်း | MTB Oahu &amp; Maui
< start="0.4" dur="1.75"> - ဟေ့ဒီရိုက်ချက်ထဲမှာကြက်သားလား >
< start="2.15" dur="0.95"> ငါတို့အခုကောင်းပြီလား >
< start="3.1" dur="0.833"> ကောင်းပါပြီ။ >
< start="3.933" dur="0.833"> ချစ်သူ >
< start="4.766" dur="0.833"> ကြှနျုပျအားလပျရကျယူနတေယျ။ >
< start="5.599" dur="2.821"> piranhas မရှိဘူးလို့ငါမျှော်လင့်တယ်။ >
< start="8.42" dur="1.98"> ဒါဟာအလွန်ကောင်းတဲ့ခရီးတစ်ခုပါ၊ >
< start="10.4" dur="1.87"> ငါရည်းစားဘရွတ်နဲ့ဒီမှာရှိနေတယ် >
< start="12.27" dur="3.29"> ငါတို့ဟာဝိုင်ယီကျွန်းကိုနှစ်ပတ်လေ့လာနေတယ်။ >
< start="15.57" dur="1.85"> Oahu ကိုတစ်ပတ်လောက်လေ့လာခဲ့တယ်။ >
< start="17.42" dur="2.18"> ပြီးတော့ Maui ကအခြားအဘို့။ >
< start="19.6" dur="2.593"> Waikiki မှာကျွန်တော်တို့နှစ်သစ်တွေနေခဲ့ကြတာအံ့သြစရာပါ။ >
< start="23.84" dur="1.69"> ထိုအခါငါငါ၏တောင်ကြီးစက်ဘီးကိုဆောင်ခဲ့လေ၏။ >
< start="25.53" dur="1.28"> ကျွန်တော့်တောင်တက်စက်ဘီးကိုယူလာရမယ်။ >
< start="26.81" dur="1.69"> ဟာဝိုင်ယီကျွန်းစုဘယ်လောက်များများရှိသနည်း။ >
< start="28.5" dur="2.08"> Brooke ရဲ့ကင်မရာနောက်ကွယ်မှာသူကကျွန်မကိုလက်သင်္ကေတပြပေးနိုင်သည်။ >
< start="30.59" dur="3.69"> ဟာဝိုင်အီကျွန်းများနှင့်အတူသူမအပေါ်သုတ်ပဝါရှိသည်။ >
< start="34.28" dur="1.4"> သူမသည်ကျွန်းရေတွက်မယ်။ >
< start="35.68" dur="1.773"> ကြည့်ရအောင်၊ ဟာဝိုင်ယီကျွန်းကြီး၊ >
< start="45.45" dur="0.833"> နီဟေး? >
< start="46.283" dur="1.117"> ခုနှစ်! >
< start="47.4" dur="1.66"> ငါခြောက်လကပြောသည်။ >
< start="53.4" dur="1.33"> - သင်သိတယ်၊ ငါသိသင့်သည်၊ >
< start="54.73" dur="2.95"> ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ့ရဲ့နောက်ကျောမှာမွေးဖွားအမှတ်အသားရှိနေလို့ပဲ။ >
< start="57.68" dur="2.99"> တကယ်တော့ဟာဝိုင်အီကျွန်းစုတွေနဲ့တူတယ် \_ t >
< start="60.67" dur="2.37"> သင်ဝေးကနေ squint လျှင်။ >
< start="67.14" dur="3.26"> (လုံ့လရှိသည့်တီးမှုတ်ဂီတ) >
< start="78.911" dur="1.789"> - ဟာဝိုင်ယီတွင်ကျွန်တော်စက်ဘီးစီးသည်။ >
< start="80.7" dur="2.14"> ငါ Maui နှင့် Kauai အတွက်တောင်ပေါ်စက်ဘီးစီး။ >
< start="82.84" dur="1.86"> Oahu မှာဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူး၊ ဒါကြီးကြီးမားမားကြီးပဲ >
< start="84.7" dur="1.9"> ငါ့ကိုငါ့ပုံးစာရင်းကိုဖြတ်ကူးရန်အဘို့။ >
< start="86.6" dur="3.67"> ကျွန်တော့်စက်ဘီးကို Airbnb ကနေလမ်းကြောင်းခေါင်းပေါ်ကိုစီးခဲ့တယ်။ >
< start="90.27" dur="1.92"> အသွားအလာလုံးဝစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောဖြစ်ပါတယ် >
< start="92.19" dur="2.18"> ယခုနှစ်ဤအချိန်တွင်မြောက်ဘက်ကမ်းပေါ်တွင်။ >
< start="94.37" dur="2.11"> ဒီလမ်းကြောင်းတွေကို YouTube ဗီဒီယိုမှာတွေ့ခဲ့တယ်။ >
< start="96.48" dur="0.833"> သူ့နာမည်ကဘာလဲ >
< start="97.313" dur="1.409"> MountainBikeDaddy သို့မဟုတ်တစ်ခုခုလား >
< start="99.66" dur="1.76"> - [TrailDad] ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်အကြောင်းပြောနေတာပါ။ >
< start="101.42" dur="1.94"> - ငါနုတ်ထွက်ဖို့အနည်းငယ်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်, >
< start="103.36" dur="3.2"> ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကစကတ်ထူပြားလေးပါပဲ။ >
< start="106.56" dur="1.92"> ငါနင့်ကိုတကယ်ဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်လို့ထင်ခဲ့တယ် >
< start="108.48" dur="1.56"> ငါကျဆင်းတော့မည် >
< start="110.04" dur="3.47"> 17 နှစ်အရွယ် Brady သည်သူ၏စက်ဘီးနှင့်အတူတက်မိတ်ဆက် >
< start="113.51" dur="3.467"> သူက "သင် Matt လား?" >
< start="116.977" dur="1.28"> "အင်း။ " >
< start="118.257" dur="1.463"> "ကောင်းပြီဒါမမျှော်လင့်ဘဲဖြစ်ခဲ့သည်။ " >
< start="119.72" dur="2.82"> သူကနေမကောင်းဖြစ်သည့် IFHT လက်အိတ်ကိုလှုပ်ခါနေသည်။ >
< start="122.54" dur="2.42"> Brady ငါ့ကိုလှည့်ပတ်ပြသရန်လုံလောက်သောကောင်းတဲ့, >
< start="124.96" dur="1.53"> ဒါကြောင့်ငါရှုံးနိမ့်ဖို့မလိုအပ်ခဲ့ >
< start="126.49" dur="1.49"> ထိုအရာသည်ကြီးလှ၏။ >
< start="127.98" dur="0.833"> မင်္ဂလာရှိ၏ >
< start="132.68" dur="0.898"> မင်္ဂလာရှိ၏ >
< start="133.578" dur="3.25"> (အနာဂတ်ဂျက်ဇ်ဂီတ) >
< start="143.42" dur="2"> အိုးအို၊ မင်းသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရပြီ။ >
< start="148.24" dur="2.08"> (ရယ်သံများ) >
< start="151.32" dur="1.26"> ဟုတ်တယ် >
< start="152.58" dur="0.84"> မင်္ဂလာရှိ၏ >
< start="183.64" dur="1.85"> ကျနော်တို့ကြီးမားတဲ့ခုန်လမ်းကြောင်းမှတက်လှိမ့် >
< start="185.49" dur="1.49"> ငါတို့စတိဗ်နဲ့တွေ့ခဲ့တယ် >
< start="186.98" dur="2.05"> သူကအဲဒီမှာလမ်းကြောင်းဆောက်သူ။ >
< start="189.03" dur="2.4"> Stoked dude, အသည်းအသန် dude, >
< start="191.43" dur="1.79"> သူလည်းငါတို့ဗီဒီယိုတွေကိုတကယ်မြင်ဖူးတယ်၊ >
< start="193.22" dur="3.14"> ဒါကြောင့်သူကမြို့ပြင်ကမြို့သူမြို့သားစုံတွဲတစ်တွဲကိုတွေ့ဖို့တကယ်ပဲပန့်ကိုတင်လိုက်တယ်၊ >
< start="196.36" dur="1.4"> မိမိအခုန်လမ်းကြောင်းစီး။ >
< start="197.76" dur="0.91"> - [စတိဗ်] ယောက်ျားတွေဘယ်မှာနေသလဲ။ >
< start="198.67" dur="0.87"> - [Matt] ဗန်ကူးဗား။ >
< start="199.54" dur="1.18"> - [စတိဗ်] အိုးမရှိလမ်း! >
< start="200.72" dur="0.833"> ကြိုဆိုပါတယ် >
< start="201.553" dur="0.833"> - [Matt] ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ >
< start="202.386" dur="0.833"> - [စတိဗ်] ဗန်ကူးဗားရဲ့ဘယ်အပိုင်းလဲ။ >
< start="203.219" dur="0.833"> - [Matt] မြောက်ဘက်ကမ်းတွင်ရှိသည်။ >
< start="204.052" dur="1.918"> - Ah dude၊ ငါမနာလိုဝန်တိုတယ်။ >
< start="205.97" dur="1.16"> - [Matt] ပြီးတော့ဘရဒီ၊ ဒီနေ့ကျွန်တော်သူ့ကိုတွေ့ခဲ့တယ်၊ >
< start="207.13" dur="1.11"> Alabama မှလာသည် >
< start="208.24" dur="1.21"> - အိုး wow အိုးအေးမြ။ >
< start="209.45" dur="2.78"> ငါ Squamish နှင့် Whistler ၌ရှိ၏ >
< start="212.23" dur="3.017"> သန့်ရှင်းသော shit, ငါ့ ဦး ခေါင်းပဲ (Beep) အဲဒီမှာတက်ပေါက်ကွဲခဲ့။ >
< start="215.247" dur="0.833"> - [WTF Boom Man Voice] ဘာလဲ၊ >
< start="216.08" dur="0.833"> (ကျယ်လောင်သောပေါက်ကွဲမှု) >
< start="216.913" dur="1.439"> - ငါဒီမှာစေတနာ့ဝန်ထမ်းတစ် ဦး ပါ။ >
< start="218.352" dur="1.351"> ထိုအခါငါသင်တို့ကိုယောက်ျားတွေကြည့်ဖို့ stoked မိပါတယ်။ >
< start="219.703" dur="1.947"> ဤသည် kinda ငါ့စီမံကိန်းကိုဖြစ်ပါတယ်။ >
< start="221.65" dur="1.09"> အခြားယောက်ျားတွေအများကြီးနှင့်အတူ။ >
< start="222.74" dur="1.196"> - [Matt] ငါကြိုက်တယ်။ >
< start="223.936" dur="3.25"> (ရော့ခ်ဂီတလှိုင်း) >
< start="229.979" dur="0.833"> မင်္ဂလာရှိ၏ >
< start="239.492" dur="0.833"> ဒါဟာအလွန်ကြီးစွာသောအချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ >
< start="240.325" dur="0.833"> ကျနော်တို့ကဤခုန်အပေါ်ကောင်းသော session တစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်။ >
< start="241.158" dur="1.642"> အဆိုပါခုန်တော်တော်ကြီးမားတဲ့ခဲ့ကြသည်။ >
< start="242.8" dur="2.04"> Cowabunga Booter လို့ခေါ်တဲ့ခုန်ကျော်သွားတယ်။ >
< start="244.84" dur="2.073"> Cowabunga Booter, ငါ့ dude ။ >
< start="254.078" dur="1.339"> ရပါတယ်! >
< start="255.417" dur="1.023"> ကောင်းတယ် >
< start="256.44" dur="1.427"> မင်္ဂလာရှိ၏ >
< start="257.867" dur="1.203"> - [စတိဗ်] ဖျားနာသည်။ >
< start="259.07" dur="0.833"> ခေါက်။ >
< start="259.903" dur="0.888"> - [Matt] ဤနေရာတွင်သင်၏အလုပ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ >
< start="260.791" dur="1.167"> - ဟုတ်ကဲ့၊ >
< start="266.143" dur="3.35"> - [Matt] အိုဘုရားသခင်၊ ဒါကိုထပ်ပြီးထိချင်တယ်။ >
< start="273.017" dur="0.833"> မင်္ဂလာရှိ၏ >
< start="279.907" dur="2.541"> (အော်) >
< start="284.01" dur="1.86"> Pupukea ငါ့ကိုသတ်တယ် >
< start="285.87" dur="1.643"> ငါနီးပါး >
< start="289.499" dur="1.241"> uh, bonked ။ >
< start="290.74" dur="0.843"> ဘုရားရေ။ >
< start="301.239" dur="1"> အိုး Fuh! >
< start="303.68" dur="1.376"> အာ >
< start="305.056" dur="1.325"> အရမ်းနီးတယ် >
< start="315.96" dur="0.833"> အိုး >
< start="324.368" dur="0.833"> မင်္ဂလာရှိ၏ >
< start="329.359" dur="3.167"> (ထပ်ကျော့ပိုသောဂီတ) >
< start="333.58" dur="2.467"> Oahu ပြီးနောက်ကျနော်တို့ Maui ကိုပျံသန်းခဲ့သည် >
< start="336.047" dur="2.983"> $ 80, $ 100-ish ပျံသန်းမှု >
< start="339.03" dur="2.913"> ထိုအခါငါ Makawao ထွက်စစ်ဆေးခဲ့ရသည်။ >
< start="352.398" dur="0.833"> ဒါဟာစူပါရွှံ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ >
< start="353.231" dur="2.029"> ငါတကယ်စီးနင်းသင့်မသင့်ကိုမေးခွန်းထုတ်ခဲ့တယ်၊ >
< start="355.26" dur="2.04"> ဤအလမ်းကြောင်းရေခဲကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။ >
< start="357.3" dur="3.26"> ဒီမှာဖုန်ကဒါရွှံ့နဲ့တူတယ်၊ >
< start="360.56" dur="1.747"> ပြီးတော့မင်းအပေါ်မှာမိုးနည်းနည်းရွာတယ် >
< start="362.307" dur="2.149"> ပြီးတော့ရေခဲကိတ်ကွင်းဖြစ်လာတယ်။ >
< start="365.634" dur="3.507"> (ဟာသစန္ဒရားတေးဂီတ) >
< start="369.141" dur="3.501"> မင်္ဂလာပါ။ >
< start="372.642" dur="3.083"> အိုဘုရားသခင်၊ ဤသည်ကားစီး။ မရပါ။ >
< start="396.39" dur="3.47"> ပြီးတော့ငါအဲရစ်တွေ့ဆုံရန်တယ်။ >
< start="399.86" dur="3.79"> သူကကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း Jake နဲ့ Tim တို့နဲ့အတူစီးသွားခဲ့တယ်။ >
< start="403.65" dur="2.467"> ကြီးစွာသောအံ့ was ဘွယ်ရှိ၏။ >
< start="406.117" dur="3.083"> (သွက်သွက်သောဂီတ) >
< start="414.62" dur="1.04"> ဟာဝယေံလွမ်။ >
< start="416.549" dur="1.44"> - [အဲရစ်] ဒါကအညိုရောင်ပါ။ >
< start="425.666" dur="1"> - [Matt] ရပါတယ်။ >
< start="429.26" dur="2.083"> (ရယ်သံများ) >
< start="437.626" dur="1.083"> ဖုန် surfin '! >
< start="443.756" dur="0.833"> အာ >
< start="446.913" dur="1.417"> ဒါကြောက်စရာကောင်းတယ် >
< start="463.998" dur="0.833"> မင်္ဂလာရှိ၏ >
< start="464.831" dur="2.083"> (ရယ်သံများ) >
< start="472.724" dur="1.158"> အင်း! >
< start="473.882" dur="0.833"> ဟူး! >
< start="477.11" dur="0.833"> အာ >
< start="478.776" dur="0.994"> - [တိ] မင်းတို့ဖြတ်သွားခဲ့တဲ့သစ်ပင်ကိုမင်းသိလား။ >
< start="479.77" dur="0.88"> အဲဒီဌာနခွဲလား >
< start="480.65" dur="0.864"> - [Jake] ဟုတ်တယ်။ >
< start="481.514" dur="0.833"> - မင်းကမင်းကိုချောင်ခဲ့တယ်၊ >
< start="482.347" dur="1.236"> သင်ငါ့ကိုလက်ျာဘက်မှာပစ်ချတယ်။ >
< start="483.583" dur="2.567"> - [Matt] သူကကျွန်တော့်ကိုအနည်းငယ်ပစ်ချလိုက်တယ်လို့ထင်ပါတယ် >
< start="486.15" dur="2.25"> - ဒါဟာရုံက detach လုပ်လိုက်တယ်။ >
< start="488.4" dur="0.833"> - [Matt] တကယ်ပဲအိုး။ >
< start="489.233" dur="1.517"> အိုးလမ်းမ။ >
< start="490.75" dur="1.913"> ငါဒီမှာငါတတ်နိုင်သမျှလုပ်နေတာငါ ya ငါသိ၏။ >
< start="497.947" dur="0.833"> မင်္ဂလာရှိ၏ >
< start="507.139" dur="2.041"> - [Matt] ၎င်းသည် (Beep) ဖျားနာနေခြင်းဖြစ်သည်။ >
< start="509.18" dur="0.833"> Aw man >
< start="510.013" dur="1.287"> - [တိ] ဒါအရမ်းပျော်ဖို့ကောင်းတယ်။ >
< start="511.3" dur="3.16"> ငါစီးနင်းနေတာကိုကြည့်နေတာဘဲ၊ >
< start="514.46" dur="1.95"> နှင့်ညာဘက်လမ်းကြောင်းမှချွတ်ခုန်, \_ t >
< start="516.41" dur="1.12"> ငါပဲထွန်။ >
< start="517.53" dur="2.25"> (ရယ်မောသံများ) >
< start="521.1" dur="0.833"> - [အဲရစ်] အဆုံးမဲ့လိုင်းများ၊ >
< start="521.933" dur="1.737"> သင် chainsaw ထွက်ချိုးချင်တယ်ဆိုရင်။ >
< start="525.03" dur="1.11"> - [Jake] မင်းမှာသူငယ်ချင်းစစ်တပ်ရှိရမယ် >
< start="526.14" dur="2.017"> သင်လမ်းထဲက shit ဆွဲထုတ်ကူညီခြင်း။ >
< start="528.157" dur="2.793"> - [Jake] ဒါကကောင်းလိုက်တာ။ >
< start="530.95" dur="2.8"> - [Jake] ဟုတ်တယ်၊ ဘယ်တော့မှမလည်ဘူး။ >
< start="533.75" dur="1.29"> - [ဂျိတ်ခ်ျ] ကျွန်ုပ်သည်အရာအားလုံး၏ကြီးမားသောပန်ကာဖြစ်သည် >
< start="535.04" dur="1.18"> သောငါ၏ (beep) ထဲကလာပါတယ်။ >
< start="536.22" dur="2.13"> - Jake က Eric Andre ကိုသတိရစေသည်။ >
< start="538.35" dur="3.091"> ထိုအခါငါအဲရစ် Andre စဉ်းစားကိုရပ်တန့်နိုင်ဘူး။ >
< start="551.45" dur="2.007"> - Chattery ဤကဲ့သို့ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ >
< start="570.78" dur="1.167"> - [Matt] ၀ ဲ! >
< start="573.532" dur="0.833"> မင်္ဂလာရှိ၏ >
< start="590.736" dur="0.833"> ကောင်းတယ် >
< start="593.91" dur="3.333"> (လုံ့လရှိသူဂီတ) >
< start="600.838" dur="1.555"> မင်္ဂလာရှိ၏ >
< start="602.393" dur="0.833"> ဟားဟား! >
< start="628.15" dur="2.51"> ငါအရမ်းပြုံးနေတဲ့အတွက်ငါ့မျက်နှာနာကျင်နေတယ်လို့ပြောတယ် >
< start="630.66" dur="3.38"> ဒါဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ >
< start="634.04" dur="1.063"> မှတ်မိဖို့တစ် ဦး စီးနင်း။ >
< start="636.15" dur="1.08"> ဒါဟာတော်တော်အန္တရာယ်များတဲ့လမ်းကြောင်းပါ >
< start="637.23" dur="1.79"> သငျသညျမယ်တစ် ဦး တည်းထွက်ရှိဖြစ်လျှင်။ >
< start="639.02" dur="0.833"> ထွက်ပေါက်မရှိဘူး >
< start="639.853" dur="3.957"> - အကယ်၍ သင့်တွင်ပြissuesနာတစ်ခုခုရှိလျှင်မရှိပါ >
< start="643.81" dur="1.057"> ညာဘက်ရှိလမ်းများအတွက်တက်ဆွဲ။ >
< start="644.867" dur="0.833"> - [Jake] မင်းပြန်တက်ရမယ် >
< start="645.7" dur="0.833"> - ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူး။ >
< start="646.533" dur="1.867"> - တစ်စုံတစ် ဦး ကသင့်အားထိုနေရာမှကယ်တင်ရန်မလွယ်ကူပါ။ >
< start="648.4" dur="3.17"> ဒီတော့မင်းသိတယ်၊ မင်းဒီလမ်းကြောင်းကိုဖြတ်ပြီးသွားရင် \_ t >
< start="651.57" dur="2.638"> သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နှင့်အတူစီးပါသို့မဟုတ်သင်အဆင်သင့်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။ >
< start="654.208" dur="3.167"> (ရွှင်လန်းသောဂျက်ဇ်ဂီတ) >
< start="658.81" dur="2.46"> အဲရစ်ကကျွန်တော့်ကို Makawao ကိုပြန်ခေါ်သွားတယ် >
< start="661.27" dur="2.04"> နေသာလှပသောနေ့၊ >
< start="663.31" dur="1.743"> ပြီးတော့သူ့သားကင်မရွန်နဲ့ကျွန်တော်စီးခဲ့တယ်။ >
< start="665.053" dur="1.27"> ဘာလဲဘာလဲ >
< start="667.573" dur="1.357"> ya ဘယ်လိုနေလဲ >
< start="668.93" dur="0.833"> သင့်နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ? >
< start="669.763" dur="0.833"> - ကင်မရွန်။ >
< start="670.596" dur="1.134"> - [Matt] ယနေ့ကျွန်ုပ်ကိုဘယ်မှာခေါ်ဆောင်နေသနည်း။ >
< start="671.73" dur="0.991"> - အိုးငါမသိဘူး >
< start="672.721" dur="0.833"> - [Matt] မင်းမသိဘူးလား။ >
< start="673.554" dur="1.266"> - ငါတကယ်ခံစားရတဲ့နေရာတိုင်းမှာပဲ။ >
< start="674.82" dur="1.097"> - [Matt] ကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်မှာရှိသနည်း။ >
< start="675.917" dur="1.013"> - Makawao ။ >
< start="676.93" dur="2.2"> - မင်းအတွက်မင်းအတွက်လက်ဆောင်တစ်ခုရှိတယ်။ >
< start="679.13" dur="1.17"> ဒီပစ္စည်းပစ္စယ junk ဟုတ်မဟုတ်ငါမသိ။ >
< start="680.3" dur="0.93"> - အိုးငါသောက်လိမ့်မယ် >
< start="681.23" dur="0.886"> - [Matt] ကောင်းတယ်။ >
< start="682.949" dur="1.883"> မင်းဘာလို့ဘီယာသောက်တာလဲ >
< start="684.832" dur="0.833"> - [Matt] ဤအရာကားအဘယ်နည်း။ >
< start="685.665" dur="0.935"> ဒါကမင်းဆီကလား >
< start="686.6" dur="1"> - အင်း။ >
< start="687.6" dur="1.55"> - [Matt] အဲဒါဘာလဲ။ >
< start="689.15" dur="1.131"> ခွက် >
< start="690.281" dur="0.849"> ဖျားနာ! >
< start="691.13" dur="2.279"> ဒါကကျေးဇူးပဲ၊ >
< start="693.409" dur="1.245"> - ငါ့အမေကဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ >
< start="694.654" dur="1.556"> - [Matt] ငါက Maui ကော်ဖီသောက်တော့မယ်။ >
< start="696.21" dur="1.775"> အိုးအဲဒီမှာ ya သွား, ya ဘာရတယ်? >
< start="697.985" dur="1.538"> - [ကင်မရွန်] yer brakez နှင့် Mahalo My Dude ကိုမတို့ပါနဲ့ .. >
< start="699.523" dur="0.833"> - [Matt] \_ t အိုး။ >
< start="700.356" dur="0.833"> ငါအတူတူနီးပါးရှိသည်။ >
< start="701.189" dur="1.461"> ငါဒီမှာ yer ဘရိတ်မထိကြဘူး။ >
< start="702.65" dur="2.75"> - ငါ yer brakez ကိုမတို့ထိချင်ဘူး >
< start="705.4" dur="3.299"> သူမအမြဲတမ်းကြောက်နေတဲ့အတွက်ကျွန်မအမေစက်ဘီးပေါ်မှာ >
< start="708.699" dur="1.021"> အစာရှောင်ခြင်း၏ >
< start="709.72" dur="1.63"> - [Matt] တခါတရံတွင်သင်သတိပေးချက်တစ်ခုလိုအပ်သည်။ >
< start="711.35" dur="1.62"> အားလုံးနွေးပါစေ။ >
< start="712.97" dur="1.43"> အိုးလျှို့ဝှက်တဲ့လမ်းကြောင်း။ >
< start="714.4" dur="1.02"> ဒီလျှို့ဝှက်လမ်းကြောင်းလား >
< start="717.3" dur="1.95"> - [Matt] ကင်မရွန်၊ မင်းငါ့ကိုရှုပ်ထွေးနေတယ်၊ >
< start="719.25" dur="0.85"> အိုဟုတ်တယ်။ >
< start="720.1" dur="1.602"> ငါခုန်ပြီးသားကြည့်ပါ။ >
< start="721.702" dur="3.167"> (အပန်းဖြေဂီတဂီတ) >
< start="727.577" dur="1.543"> မင်္ဂလာရှိ၏ >
< start="729.12" dur="1.511"> ဒီပစ္စည်းအတွက်သင့်သံခမောက်လုံးလိုကောင်းလိုလိမ့်မည်။ >
< start="739.87" dur="1.188"> - Sprite နှုန်း [Matt] မိုင်? >
< start="741.058" dur="1.572"> - [ကင်မရွန်] ဟုတ်ပါတယ်။ >
< start="746.328" dur="1.054"> - ငါသူ့ကိုနောက်ထပ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပြသချင်တယ်, >
< start="747.382" dur="0.993"> နောက်မှပြန်သွားလို့ရတယ် >
< start="748.375" dur="0.833"> အာ - Wrangler? >
< start="749.208" dur="1.079"> - အင်း Wrangler ။ - အိုကေသွားကြကုန်အံ့။ >
< start="750.287" dur="2.687"> - ငါတို့သူ့ကို Wrangler ကိုပြပါလိမ့်မယ်, ပြီးတော့ရဲ့နောက်ကျောကိုတက်ကြကုန်အံ့။ >
< start="752.974" dur="0.833"> - [Matt] ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ >
< start="753.807" dur="1.033"> သူတို့နောက်တစ်လမ်းကိုသွားခဲ့သလား။ >
< start="754.84" dur="2.71"> - မဟုတ်ပါ၊ တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ Ravine ကိုတက်ရန်ဖြစ်သည်။ >
< start="757.55" dur="1.5"> သောကုန်းတက်လမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ >
< start="761.75" dur="0.833"> အိုး! (Airhorn ဆူညံသံ) >
< start="765.21" dur="1.7"> အဲရစ်နဲ့ကင်မရွန်တို့မှာတကယ်ကိုကောင်းတဲ့စနစ်ရှိတယ်။ >
< start="766.91" dur="4.03"> ဘယ်မှာအဲရစ်အတွင်းပြွန်နှင့်အတူကင်မရွန်ခေါ်ဆောင်သွားသည်ဆိုပါစို့ >
< start="770.94" dur="1.9"> နှင့်တစ် ဦး ratchet သိုင်းကြိုးသို့မဟုတ်တစ်ခုခုနဲ့တူ။ >
< start="774.553" dur="1.137"> - [မိန်းမ] ဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့အကြံဥာဏ်လဲ။ >
< start="775.69" dur="3.49"> အဲရစ်လည်းခါးပတ်ကိုခါး၌စည်းလိုက်သည်၊ >
< start="779.18" dur="2.92"> ပြီးတော့အတွင်းပိုင်းပြွန်ကိုကင်မရွန်ရဲ့အရက်ဆိုင်တွေဆီကို \_ t >
< start="782.1" dur="1.4"> သူကပဲအဲဒီမှာတက်တတ်၏။ >
< start="783.5" dur="2.37"> ပြီးတော့အဲဒီမှာသူတို့တက်နေကြတယ်၊ >
< start="785.87" dur="1.37"> ငါစဉ်းစားခဲ့လျှင်, >
< start="787.24" dur="1.57"> ကျွန်တော့်အဖေအတွက်ဂိမ်းကစားခဲ့မှာပါ။ >
< start="788.81" dur="1.06"> သူကနှစ်ခါလုပ်ခဲ့ပြီးပြီ။ >
< start="789.87" dur="1.12"> လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်လိုပဲ။ >
< start="790.99" dur="2.843"> ဒီတော့ Cameron မင်းအကြိုက်ဆုံးလမ်းကြောင်းကဘာလဲ။ >
< start="801.031" dur="1.439"> - [Matt] သစ်ပင်များအားလုံးကိုသင်သိသလော။ >
< start="802.47" dur="1.964"> သငျသညျငါ့ကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြောပြ, သစ်ပင်အားလုံးသိတယ်။ >
< start="806.34" dur="1.664"> - [Matt] ကျွန်ုပ်သည် guinea pigging မဟုတ်ပါ။ >
< start="808.004" dur="0.833"> (ရယ်မောသံများ) >
< start="808.837" dur="1.363"> - ကောင်းပြီ၊ ငါထင်လိမ့်မယ်၊ >
< start="810.2" dur="2.21"> မင်းဒီမှာသိသမျှအရာအားလုံးနဲ့တူတယ်ဆိုတာမင်းသိတယ် >
< start="812.41" dur="2.151"> သငျသညျကနေဒါယောက်ျားတွေများအတွက်ခြောက်ပေကွင်းပေါ်တွင်ကစား။ >
< start="814.561" dur="1.801"> (Matt ရယ်) >
< start="816.362" dur="3"> (ချမ်းတေးဂီတ) >
< start="831.229" dur="0.833"> မင်္ဂလာရှိ၏ >
< start="843.331" dur="0.833"> အာ >
< start="844.164" dur="0.833"> ဒါကအံ့သြစရာပဲ! >
< start="844.997" dur="1.383"> ဒါကအရမ်းပျော်ဖို့ကောင်းတယ် >
< start="846.38" dur="1.01"> ဒီခရီးစဉ်ကအရမ်းကိုအေးပါတယ် >
< start="847.39" dur="1.69"> ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါဒေသခံတွေနဲ့တွေ့ဆုံရတယ်။ >
< start="849.08" dur="3.68"> သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုပစ္စည်းတွေဝေပေးပြီးရိုက်ခွင့်ပေးတယ်။ >
< start="852.76" dur="3.7"> ပြီးတော့ဒီဗွီဒီယိုကိုလူတိုင်းဝေမျှပါ။ >
< start="856.46" dur="1.75"> ငါ့ကိုလှည့်ပတ်ပြသတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် >
< start="858.21" dur="1.54"> ကင်မရွန် ... >